Somaliya oo bixin weyday Qaaraankii Q/Midoobay (Sidee loogu ogolaaday inay sii lahaato Codeynta..?) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Somaliya oo bixin weyday Qaaraankii Q/Midoobay (Sidee loogu ogolaaday inay sii lahaato Codeynta..?) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Soomaaliya ayaa ka mida dalal dhowr ah oo aan bixin Qaaraankii xubinnimada Qaramada Midoobay, waxaana taasi lagu weyn karaa codeynta qaraarrada Qaramada Midoobay oo muhiim u ah dal kasta.
Dalalka Iran, Venezuela iyo Sudan oo lagu leeyahay Lacag ku ururtay oo Qaaraanka Qaramad Midoobay ah, qeybna ka ah miisaaniyada UN-ku ku shaqeeyo, ayaa ka mida 8 Dal oo waayi doona xuquuqdooda codbixinta ee Golaha loo dhan yahay oo ka kooban 1933 dal, sidaana waxaa qoraal la faafiyey k usheegay Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay.
Dalalka kale ee lumiyay xuquuqda cod bixinta Qaramada Midoobay waxaa ka mida: Antigua iyo Barbuda, Republic of Congo, Guinea, Papua New Guinea iyo Vanuatu, sida uu Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ku sheegay warqadda uu u diray Madaxweynaha Golaha Guud Abdulla Shahid.
Golaha loo dhan yahay ee Q/Midoobay ayaa go’aamiyay in saddex dal oo Afrikaan ah oo ku jira liiska dalalka Qaraanka lagu leeyahay ee weyn lahaa Codeynta oo kala ah: Somaliya, Comoros, iyo Sao Tome and Principe ay sii heystaan xuquuqdooda codbixinta ilaa kulanka guud ee sanadkii hore, markii xaaladahooda liita loo eegay.
Soomaaliya ayaa lagu leeyahay lacagtii Qaaraanka Q/Midoobay oo ku dhow 1.5 Milyan oo Dollar. Waxayna arrintan imaaneysaa iyadoo madaxweynaha xilligiisu dhammaaday ee Soomaaliya dhowaan shaaciyey inay Soomaaliya u sharxan tahay ka mid noqoshada xubnaha aan joogtada ahayn ee Golaha Ammaanka Qarmada Midoobay.
Previous articleXaqiijin: Farmaajo oo iidheh ka dhigtay Tahriibayaal laga soo celiyey Liibiya (3 dhinac oo iska kaashaday)
Next articleXubnaha u tartamaya Guddoonka Guddiga Doorashada FEIT oo lagu soo rogay Lacag diiwaangelin ah!